न्यादी हाइड्रोपावरको IPO लम्जुङको स्थानियलाई खुल्यो, क-कसले भर्न पाउने ? - Share Gyan
शेयर ज्ञान — August 17, 2021 add comment
न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आइपिओ लम्जुङको प्रभावित स्थानीय क्षेत्र र जिल्लाबासीलाई आज भदौ १ गते देखि खुलेको छ। कम्पनीको रु. १८ करोड बराबरको आईपीओमा आवेदन खुला गरिएको छ। यो आईपीओमा आयोजना प्रभावित, स्थानीय र न्यादी हाइड्रोका कर्मचारीले आवेदन दिन पाउनेछन्।
क-कसले भर्न पाउने ?
कम्पनीले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिमको अति प्रभावित क्षेत्र लमजुङ जिल्लाको
मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं. ३ (साविक खुदी गा.वि.स.का वडा नं. १, २, ३ र ६ )
मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं. ६, ७ र ८ (साविक बाहुनडाँडा गा.वि.स. र साविक भुलभुले गा.वि.स. का सम्पूर्ण वडाहरु) का स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि ५ लाख कित्ता छुट्याइएको छ।
त्यस क्षेत्र बाहेक लमजुङ जिल्लाका अन्य क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि १० लाख कित्ता शेयर निष्काशन गरिएको छ ।
बाँकी ३ लाख कित्ता भने कम्पनीले आफ्ना संस्थापक शेयरधनी बुटवल पावर कम्पनी र लमजुङ विद्युत विकास कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि निष्काशन गरिएको छ।
यसरी प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यका कुल १८ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो।
कहिले सम्म भर्न सकिने ?
भदौ १ गतेदेखि निष्कासन हुने आईपीओ खरिदका लागि छिटोमा भदौ १५ गतेसम्म र ढिलोमा ३० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
जोखिम कस्तो छ ?
आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी डबल बी इस्युअर [CARE-NP BBB – (Is)] रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
कसरी आवेदन दिने ?
जिल्लाभित्र रहेका संकलन केन्द्रहरु
एनएमबि बैंकको बेशीसहर शाखा
सिभिल बैंकको भुलभुले शाखा
ग्लोबल आइएमई बैंकको बेशीसहर, उदिपुर, दोर्दी, भोलेँटार, सुन्दरबजार र भोटेओडार शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।
कम्पनीका संस्थापक शेयरधनी संस्थाका कर्मचारीहरुले कम्पनीको कार्यालय, बुद्धनगरबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।
साथै जिल्ला बाहिर रहेका जिल्लाबासीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी–आस्वा सदस्या बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ। सी–आस्वा सदस्या बैंक भन्नाले तपाईले जुन बैंकबाट CRN लिनुभएको छ त्यो बैंकमा गएर फारम लिएर आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
आवेदकले स्थानीय बासी प्रमाणित हुने कागजात (नागरिकता) सहित हालसालै खिचेको फोटो सहित आवेदक स्वयम्ले दस्तखत गरेको फारम बुझाउनुपर्नेछ।
१६ वर्षभन्दा मुनिका आवेदकको हकमा संरक्षकले जन्मदर्ता सहित आवेदन फारम बुझाउनु पर्नेछ। साथै संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्नेछ।
अन्य जिल्लाबाट लम्जुङ जिल्लामा विवाह भै आएका महिलाहरुको हकमा विवाहदर्ताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ।
अन्य जिल्लाबाट बसाई सरि लम्जुङ आएका आवेदकको हकमा बसाई सराई प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ।
एक जनाले एउटा मात्र आवेदन दिनुपर्ने छ अन्यथा सबै आवेदन रद्द हुनेछ।
रु. ५०,००० भन्दा माथिको रकम बराबरको लगानीकर्ताले Account Payee Cheque मार्फत रकम बुझाउनु पर्नेछ।
रु. ५,००,००० वा सो भन्दा बढी रकम बराबरको लगानी गर्ने लगानीकर्ताले अनिवार्य PAN Number उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
प्रोमोटर शेयर लिइसकेकाहरुले फेरी स्थानीयमा आवेदन दिन पाउँदैनन ।
नोट : स्थानीयको लागि खुलेको आइपिओमा मेरो शेयरबाट आवेदन दिन सकिदैन।
आयोजनाबाट प्राप्त हुने आयमा पहिलो १० बर्ष आयकर छुट हुने र सो पश्चात अर्को ५ बर्ष ५० प्रतिषत आयकर छुट हुने हुँदा लाभांशको दर बढी रहेको।
सम्पूर्ण संरचना, मेशिन तथा उपकरणहरुको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बिमा गरिएको।
कम्पनी संग दक्ष युवा जनशक्ति रहेकोले नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको बिकास र निर्माणको काममा सफल रहेको।
संस्थापक शेयधनिहरु जलविद्युत क्षेत्रमा अनुभवी कम्पनी भएको ।
बुझ्नु पर्ने कुरा
विद्यमान नियम अनुसार स्थानीयलाई बाँडफाँड भएको शेयर बाँडफाँड भएको मितिले ३ वर्षसम्म बेच्न पाइदैन। यसलाई शेयर बजार भाषामा लकईन पिरियड भनिन्छ। अन्य साधारण शेयर जस्तै नेप्सेमा सुचिकित हुने बितिकै किने बेच गर्न नमिल्ने भएकोले स्थानीयलाई खुलेको आइपिओमा कम्तिमा पनि ३ बर्ष लगानी होल्ड गर्न सक्ने रकम बराबरको शेयर किन्नु पर्दछ।
न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनी मार्च १, २००७ मा स्थापना भएको संस्था हो। कम्पनीलाई बुटवल पावर कम्पनी र लम्जुङ इलेक्ट्रिसिटि डेभेलप्मेन्ट कम्पनीले संयुक्त रुपमा प्रोमोट गरेको छ । कम्पनीले लम्जुङ जिल्लाको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा ३० मेगावाट क्षमताको न्यादी हाइड्रोपावर परियोजना निर्माण गरिरहेको छ। यो कम्पनीको प्रतिमेगावाट लागत अनुमान २० करोड ३९ लाख २५ हजार रहेको छ भने कुल लगानी अनुमान ६ अर्ब ११ करोड ७७ लाख रहेको छ। यो कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड तथा सहनिष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेका छन्।
आधिकारिक आव्हान पत्र यता डाउनलोड गर्न सकिने छ।
Nyadi Hydropower न्यादी हाइड्रो